HGH Thailand - mianatra bebe kokoa momba ny hormonina mitombo ao Bangkok
Hormonal growth (Hormonal growth, GH, HGH, somatotropin, somatropin) - Hormone peptide eo amin'ny hôpitera avela, izay ampiasaina amin'ny fanatanjahantena Ho an'ny fanabeazana aina. Ny hormone na somatotropine (avy amin'ny teny latinina soma - vatana) dia nahazo ny anarany ho an'ireo tanora ireo, miteraka fahasamihafana marim-pototra (linear). Ny fitomboana dia vokatry ny fitomboan'ny taolana tapaka ny tongotra.
Ny homamiadan'ny hormonina mitombo ao amin'ny rà dia 1-5 ng / ml, raha ny tampony dia mety hitsangana amin'ny 10-20 ary na 45 ng / ml. Voalohany tao amin'ny 1956 izy. Ny hormone fitomboan'ny sekretera ao amin'ny andrin-jiolahy ho valin'ny famantarana avy amin'ny hypothalamus. Matetika, rehefa afaka roa taona, dia mihena ny famokarana io hormonina io. Ny dingana arovana dia mifandray mivantana amin'ny tahan'ny fanafahana ny hormone mitombo. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny 20 taona, isaky ny 10 taona dia mihena ny isan'ny vokatra amin'ny 15%.
Tsy misy fahasamihafana ara-piraisana ny hormone. Izany hoe, mitovy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny lanjany. Na dia eo aza ny fampiasana ny fiomanana amin'ny hormone mitombo, dia voarara ny VADO (Fikambanana manohitra ny Doping an'izao tontolo izao) HGH fiomanana Misy ao Thailand.
- Ny vokatra anabolika - miteraka fitomboan'ny taova
- Hetsika fihetsika manohitra ny fihanaky ny fo - manakana ny fanimbana ny tazomoka
- Mampihena ny tavy
- Manatsara ny fampiasana angovo
- Manalefaka ny fahasalamana
- Manana ny vokany amin'ny fanarenana
- Manosika ny fitomboan'ny taovam-pananahana (ateraky ny taona)
- Mampisy ny fitomboan'ny taolana sy ny fitomboan'ny fitomboan'ny tanora hatramin'ny 26 taona (mandra-pahatongan'ny fanakatonana ny sehatra fitomboana), manamafy ny taolana
- Mampitombo ny haavon'ny glucose amin'ny ra
- Manamafy ny rafitra fiarovana
Ny sasany amin'ireo vokatry ny zava-mahadomelina dia miteraka ny tenany, fa ny ampahany lehibe amin'ny vokany dia entina amin'ny fampiasana ny toetran'ny tosidra IGF-1 (taloha ny nantsoina hoe somatomedin C), izay novolavolain'ny hormone mitombo ao amin'ny aty ary manentana Ny fitomboan'ny taova indrindra. Saika ny vokatry ny hormone mitombo amin'ny fanatanjahantena mifandraika amin'ny hetsika IGF-1.
Fiovana mifandraika amin'ny taonan'ny hormone
Mihena tsikelikely ny tsiambaratelon'ny hormonina mitombo. Izy io dia kely indrindra amin'ny zokiolona, ​​izay nihena tsikelikely, ary ny hafanam-po sy ny amplitan'ny tampon'ny sekretera. Ny haavon'ny hormone mitombo isaky ny fahazazana, ny tampon'ny tampon'ny ambaratonga lehibe indrindra amin'ny fitomboan'ny sekretera mandritra ny vanim-potoanan'ny zatovo dia fitomboana haingana kokoa ary koa mandritra ny fahamaotiana. Ireo rhythm caddy ao amin'ny sekreteran'ny hormone mitombo:
Ny tsiambaratelon'ny hormone mitombo sy ny hormonina maro hafa izay mitranga matetika ary misy tampony marobe mandritra ny andro (matetika ny tsiambaratelon'ny tsimok'aretina dia tonga amin'ny ora 3-5). Ny tampon'ilay tendrony dia voamarika amin'ny alina, tokony ho adiny iray aorian'ny matory.
Hormonal growth in bodybuilding in Thailand
Tamin'ny voalohany, ny fikarakarana ny hormonina mitombo dia nampiasaina ho an'ny tanjona ara-pitsaboana, na izany aza, saika ny fotoana dia io hormone io dia niparitaka tamin'ny fanatanjahan-tena, noho ny fahafahany hampitombo ny fihinan'ny vozona sy hampihenana ny vatana. Ny fikarakarana voalohany ny HGH dia faty ara-pitaka, ary ny 1981 ihany dia natao tambatra tambatra somatotropine.
Ao amin'ny 1989, noraràn'ny Komity Olaimpika ny hormonina fitomboana bakteria. Na dia voarara aza ny fampiasana hormonina mitombo amin'ny tontolon'ny atletika, dia nitombo imbetsaka ny fivarotana zava-mahadomelina nandritra ny folo taona farany. Ny haitao dia ny hormone ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena, indrindra fa amin'ny fambolena, izay mifangaro amin'ny fanafody hafa anabolika.
Ampitomboy ny fo mitebiteby sy ny lelafo matavy
Ny antony lehibe mahatonga ny HGH amin'ny fanatanjahan-tena dia ny fahafahana mampihena ny habetsaky ny matavy. Ankoatra izany, ny fanadihadiana dia naneho fa ny fitomboan'ny hormone dia mitarika hozatry ny fihenan-tsakony, ny fatran'ny fifandraisana ary ny fitomboan'ny sela hozatra noho ny fihenan'ny rano.
Misy vokany tsara hafa amin'ny hormone mitombo - manamaivana ny habetsaky ny ratra. Izany dia vokatry ny fahafahany manatanjaka ny taolana sy ny sifotra (tendons, cartilage). Ny hormone mitombo dia manamora ny fanasitranana fanasitranana sy fiterahana rehefa ratra.
Tsara homarihina fa tsy misy dikany ny fampiasana ny HGH amin'ny herin'aratra, satria hita tao amin'ny fanandramana fa tsy mampitombo ny fahombiazan'ny herinaratra izy io. Ny somatotropin koa dia mampitombo ny fitandroana sy ny fahombiazany, ary ny mifanohitra amin'izany, ny fihenan'ny alahelon'ny reraka sy ny fampihenana ny fahasitranana, noho izany dia tsy misy ilàna azy ireo ho an'ny atleta fanatanjahan-tena toy izany, izay ahitana ireo famantarana ireo.
Ny famintinana ankapobeny dia ny fampiasana hormonina fampiroboroboana azo ampiasaina amin'ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny tanjona ahazoana fanampiana.
Tsy misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny penis ny zava-mahadomelina ary ny vokatra dia tsy miteraka vokatra androgenic ary tsy mitaky ny PCT aorian'ny latsak'izay latsaky ny lanjany manontolo dia nihena kely (3-4 kg), ary Ao anatin'ireo tranga sasany dia tsy misy fiovana velively amin'ny voina goavambe goavana.
Ny sarany avoakan'ny zava-mahadomelina dia eo amin'ny 2-3 arivo dolara isaky ny mandeha.
Ny voka-dratsin'ny hormone amin'ny fitomboan'ny olombelona
Satria ny HGH dia voajanahary ao amin'ny vatan'olombelona, ​​dia tsy fahita firy ny vokatry ny HGH. Ny vokany dia miteraka indrindra amin'ny tranga sasany izay ampiasain'ny Hormone fampandrosoana amin'ny doses avo kokoa noho ny soso-kevitra sy maharitra kokoa noho izay voalazan'ireo manam-pahaizana. Amin'ny fampiharana, misy ny vokatry ny fiharian'ny olombelona Hormone (matetika amin'ny fisehoan-javatra):
Tandela syndrome Dia asehon'ny fanaintainana sy ny fidorohana amin'ny elany. Izany dia vokatry ny fitomboan'ny vozon'ny fihenam-bidy ny haratony. Ity vokatra ity dia tsy mampidi-doza ary vetivety dia tapitra aorian'ny fampihenana ny doka.
Ny fihenan'ny ranon-javatra, tsy misy fiantraikany eo amin'ny lafiny, satria ny fihenan'ny fluid dia ao amin'ny hozatra, manome azy ireo halehibe sy elasticity. Amin'ny ankapobeny, ny zava-mitranga kely dia kely aorian'ny fiafaran'ny fianarana.
Ny tosidra avo lenta - dia nesorina na tamin'ny fihenan'ny dg an'ny HGH, na fampiasana fanafody antihypertensive.
Ny fihenan'ny asan'ny tiroidan'ny tiroida - dia tsy maneho ny heviny, satria ambany loatra ny famoretana. Ho an'ny fanafoanana sy fampitomboana ny fahombiazan'ny tsingerina dia ampiasaina ny Thyroxine amin'ny doka 25 mcg isan'andro. Rehefa tapitra ny fatran'ny hormonina, dia voaverina tanteraka ny asan'ny tiroida.
Hyperglycemia - fampitomboana ny glucose amin'ny rà. Manala insuline na zava-mahadomelina manaitra ny pancreas (gliclazide). Tsy mahazatra ny fepetra fanampiny ary tsy azo ovaina intsony. Azonao atao ihany koa ny mandray fanafody miaraka amin'ny asidra lipoika alpha, mamerina ny fahatsapana insuline.
Acromegaly - ny aretina dia vokatry ny fanararaotana zava-mahadomelina ny hormone mitombo. Raha ampiharina tsara dia tsy hita.
Ny fitsaboana ny fo sy ny taova hafa dia tsy natao afa-tsy amin'ny fampiasana maharitra ny HGH amin'ny dosie goavana. Raha ampiharina tsara dia tsy hita.
Ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina amin'ny hormone mitombo
Ny fitomboan'ny taovam-pandevonan-tena - dia inoana fa ny hormonina mitombo dia afaka mampitombo ny kibo noho ny hyperplasia ny taova anatiny (satria ny tsinay sy ny taova dia manana solosaina ho an'ny IGF-1). Tsy misy porofo ara-tsiansa amin'izao zava-misy izao, saingy, ohatra ohatra mamirapiratra momba ny fiovan'ny taovam-pandaminana eo amin'ny tontolo iainan'ireo mpandàla biriky matihanina miaraka aminy. Na izany aza, ny traikefa azo ampiharina amin'ny atleta maro dia maneho fa ny fihazakazahan'ny hormone mitranga dia tsy mitarika ho amin'ny fivoaran'ny kibo. Ny manam-pahaizana dia mihevitra fa ny fampivelarana ny kibo (amin'ny teny Anglisy mahazatra ny teny hoe "GH gut") dia manana fiantraikany simika voajanahary maro ary azo atao izany rehefa mampiasa dosie goavana amin'ny GH miaraka amin'ny insuline, steroïde, miaraka amin'ny fihenan'ny vola be Sakafo.
Ny fiantraikany amin'ny hery sy ny asan'ny penis - ny HGH dia tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny firaisana ara-nofo.
Famaritana ny tsiambaratelo momba ny hormone mitombo - Ny profesora Elmer M. Cranton, MD dia nanao fikarohana tamin'ny marary 100, izay tsy hita fa nanakana ny sekretera manokana.
Ny kansera - ny hormone miteraka dia miteraka fahasarotana goavana amin'ny fizarazaran'ny sela mpikatroka, ka lasa miahiahy ny mpikaroka momba ny hormonina ho an'ny hozatra. Nisy ny fianarana momba ny fiverenana mitsidika, izay nanatrehan'ny olona voan'ny hormone mitombo, ny fatran'ny neoplastika dia tsy mitovy amin'ny an'ny mponina hafa izay afaka miresaka momba ny tsy fisian'ny kanseran'ny voan'ny hormone.
Ny famintinana ankapobeny momba ny fiantraikany
Ny hormone mitombo dia mahalana vao miteraka vokatra hafa raha ampiharina amin'ny dosie maoderina. Saika ny fihenan'ny vokatra rehetra dia azo averina. Tamin'izany fotoana izany, dia voaporofo fa ny fanomanana ny HGH dia afaka manavotra ny vatana mba hanatsara ny fahasalamana ara-batana, hampihenana ny kolesterola ratsy, hanatsara ny hoditra, hanamafy ny taolana sy ny ligaments ary ny vokatra tsara hafa.
Mpandrindra ny hormone mitombo
Ny fitantanana lehibe amin'ny sekreteran'ny hormone mitombo - hormones peptide ao amin'ny hypothalamus (somatostatin sy somatoliberin), izay nozarain'ny sela neurosecretory amin'ny hypothalamus ao amin'ny vavan'ny vavahadin-jiolahy ary miasa mivantana amin'ny somatotrope. Na izany aza, ny fahasimban'ny hormones sy ny tsiambaratonan'ny hormonina mitombo dia voan'ny aretina maro isan-karazany. Ny mpahay siansa dia nanaporofo fa ny hamaroan'ny hormonina mitombo dia mety hampitombo ny fotoana 3-5, raha tsy mampiasa fampiasa hormonal.
Ny peptide no tena mampirisika ny hormone hitombo, hampitombo ny habetsaky ny 7-15 indraindray ny sandan'ny dingana mitovy amin'izany:
Ny hormone ary ny peptides mitombo amin'ny taovam-pananahana
Peptides Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Izy ireo dia vondrona voajanahary na singa ahitana tsangambatom-bolo, an'arivony na an'arivony ao amin'ny tarika Monomerika - asidra amine. Ity kilasy ity dia tena samihafa ary manao asa maro isan-karazany ao amin'ny vatana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ihany ireo peptides ampiasaina amin'ny fanatanjahantena ho fanitsiana ireo mari-pamantarana ara-batana.
Ao an-tsenan'ny Thailand Matetika dia misy peptides, izay mandrisika ny hormonina mitombo. Ny peptides malaza indrindra amin'ny fambolena any Thailandy:
Avy amin'ny vondrona Ghrelin (GHRP): (mamorona voafantina voany GR avy hatrany taorian'ny tsindrona, tsy misy dikany ny andro sy ny fisian'ny somatostatin ao amin'ny ra).
GHRP-6 sy Hexarelin
Avy amin'ny vondrona fampiroboroboana Hormone mamoaka hormone (GHRH): (fampidirana ao amin'ny vatana dia miteraka fitomboan'ny fihenan-tsain'ny fifantohana izay ho malemy amin'ny ora rehefa voan'ny somatostatin ny sekretera voajanahary GRS, ary ambony mandritra ny voajanahary Ny fampitomboana ny fifantohana GR (ohatra mandritra ny alina). Amin'ny teny hafa, ny GHRH dia mampitombo ny famafazana GRS, tsy manelingelina ny fizotry ny fizotry ny natiora.)
HGH Frag (176-191) Dia sombintsombin'ny hormonina mitombo (fatina fatotra)
Ny tombotsoan'ny peptides
Fanontaniana maro no miseho, maninona no ampiasaina ho an'ny sela voajanahary vaovao, raha misy hormonina ho an'ny atidoha? Tsotra ny valiny: manatsara ny peptide manana tombon-tsoa maro.
Ny peptides dia mora kokoa noho ny hormone mitombo. Ny vidin'ny dingana mitovy amin'izany dia ho im-betsaka kokoa.
Ny fomba fiasa samihafa sy ny antsasaky ny fiainana dia ahafahantsika manipika ny tohatra mifantoka amin'ny valim-pifidianana tsara indrindra.
Ny fiantraikany samihafa amin'ny hanoanana sy ny metabolism dia ahafahanao manolotra safidy ho azy ireo na zavatra hafa.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fehezin'ny lalàna ny famokarana sy ny fizarana peptides, noho izany dia azo antoka ny mandidy an-tserasera.
Vetivety sy tototra tanteraka, noho izany dia tsy misy atahorana ny fanaraha-maso doping.
Peptides, ary ny hormone mitombo ara-pahaizana tsotra dia mora manamarina ny maha-izy azy. Efa ampy ny fitsapana ny sombin'ny somatotropine amin'ny plasma aorian'ny fampiasana rongony.
Mba hampidirana ny hormonina mitombo isa?
Ny hormone fitomboana dia afaka ampiasain'ny lehilahy sy ny vehivavy mandritra ny taonan'ny 20 taona (ny tanora bebe kokoa dia mety hahatsapa ny fitomboan'ny taolana) mba hanamafisana ny lokan'ny mozika. Mihabetsaka ny masomboly manontolo, izany dia vokatry ny lehibe Tavy.
Ny voka-dratsin'ny vokatra mandritra sy aorian'ny fianarana dia tsy voamarina matetika.
Ny fianarana dia mifanohitra amin'ny olona voan'ny diabeta (mampitombo ny habetsan'ny glucose ao amin'ny ra) ny fampiasana ny diabeta (fitomboana hormonina), tokony ampiasaina amin'ny fampiasana hertrillon (fampitomboana ny hormone ny olombelona). Alohan'ny hampiasana ny rongony dia tsy maintsy manatona dokotera ianao.
Top 3 malaza HGH any Thailand